Maalinta: Juun 25, 2019
YOLDER Wadaagga Talooyinka TIS ayaa wadaagay xarunta dhexe ee BTS
Ururka Shaqaalaha Gargaarka Tareenka (YOLDER) ayaa ka qayb galay shirkii ay qabanqaabisay Ururka Gaadiidka Shaqaalaha ee United (BTS) si ay u soo ururiyaan maalgalinta 2020-Wada-xaajood wadaxaajoodka wada-xaajoodka shaqaalaha shaqaalaha ee ka hadlaya xilliga 2021-5. [More ...]
Khudbadiisa ka hor doorashadiisa, Ekrem İmamoğlu wuxuu ku tilmaamay mashruuca Channel Istanbul mid aan loo baahnayn. In kasta oo madaxweynaha cusub uu ahaa Imamoglu, masiirka mashruucu sidoo kale wuxuu ahaa arin xiiso badan. doorashooyinka Istanbul Turkey ayaa qufulan aad ka danbeeya. Ku guuleysta doorashooyinka [More ...]
Dhismaha dariiqa cusub ee 90 ee Shanleyurfa
Borotokool iskaashi ayaa la saxeexay inta u dhaxeysa Dowlada Hoose Şanlpolurfa iyo La socoshada Maalgashiga Şanlıurfa ee Maamulka iyo Xiriirka (YİKOB) ee ku saabsan howlaha lagu xaqiijinayo inta ay gaarsiisan tahay “Adeegyada Badbaadada Bulshada”. Iyada oo xaflad lagu qabtay hoolka shirarka ee maamulka, Şanlıurfa Metropolitan [More ...]
'Waxaannu Wadajir u Jirnaa Isboortiga' Dhacdooyinka Dooxada Baaskiilka
Dowladda Hoose ee Magaalaweynta Sakarya waxay sii wadaysaa soo dhoweynta booqdayaasha Dalxiiska Baaskiilka ee Sunflower. Ugu dambeyntiina, carruurta ka socota Ururka Taageerada Qaxootiga waxay heleen tababar badbaado leh oo baaskiil xaflada ah 'Waxaan Si Weyn Ugu Wadajirnaa Isboortiga'. Dhalinyarada Dawlada Hoose ee Sakarya [More ...]
Duqa Magaalada ee Kayseri Memduh Büyükkılıç, ka dib markii xiritaanka isku xidhka saacadaha 3,5 ee lala yeeshay saraakiisha, ayaa yimid garoonka waxayna baadheen maalgelintii goobta. Mayor Mayor Büyükkılıç ayaa sidoo kale raacay shaqada asphalt ee 15 July Boulevard. [More ...]
Canray gaadiidka, oo shirkadda Yeshilova Holding ay ku guulaysatay sannadihii 44 ee khibradda aluminium ee nidaamka tareenka, ayaa noqday mid ka mid ah wada-hawlgalayaasha mashruuca ee Tareenka Korontada ee laga wada shaqeyn doono TÜVASAŞ. TÜVASAŞ waxaa lagu soo bandhigay nolosha 2019 [More ...]
Farshaxanka Gaarka ah ee Gaarka ah (Kindergarten) Kindergarten wuxuu soo saaray mashruuc cusub oo leh aragtida waxbarashada. "Waxbarashadu waa jikada nolosha. Barayaashu waa shefiyo heer sare ah oo go'aaminaya waxa ka imaan doona jikada. Heerka saxan kasta [More ...]
14 oo ka socota WADARTA 'Dhexdhexaadinta Masters' Event
a keentay soo saaraha ah ee TOTAL warshadaha saliidaha dalka Turkiga, iyadoo dhacdooyinka lagu qabto 2019 14 2 kun oo idil gobolka ayaa ujeedkiisu yahay inuu ustayl 500 sano shirka 28 waa ka weyn wax soo saarka iyo suuq-geynta ee saliidaha dalka Turkiga [More ...]
Kadib doorashooyinka IMM, indhaha ayaa loo rogay mashruucyada socda
Ka dib doorashooyinkii Istanbul, indhaha ayaa loo jeestey mashaariicda socda. Taas macnaheedu waxa weeye, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan wuxuu soo saaray hadal muhiim ah, wuxuu soo gudbiyey fariimaha soo socda: Ankara-Sivas High Speed ​​Train train [More ...]
95 ee Konya Gawaarida YHT ee New YHT Dhameystirtay
Duqa Magaalada Konya ee caasimadda Ugur Ibraahim Altay, dhismaha xarunta cusub ee YHT ee dhismaha ee dhismaha degmada magaalomadaxda dhismaha baaritaanada la helay. Madaxweyne Altay, 4 April, isla maalintaas sida ugu dhakhsaha badan mazbataya [More ...]
Khadka kale ee Mashruuca ayaa imanaya İzmir
Magaalada Metropolitan Municipality ayaa gacanta ku soo xidhay xargaha ugu dheer magaalada. 28 Kaamilada Adnan Menderes Airport-Karabaglar-Halkapınar diyaarinta mashruuca ayaa bilaabmay. Si wadajir ah ula socda tareenka Buca, [More ...]
Shirkadaha baabuurta gawaarida ah ayaan u diyaarsaneyn isbedelka digital
Cilmi-baaris wadajirka ah oo ay sameysay shirkadda Egon Zehnder, oo ah shirkadda cilmi-baarista fulinta, ayaa shaaca ka qaaday in qaybta gawaarida ay weli ku sii jirto fasalka sababta oo ah isbedelka dhaqanka ee loogu baahan yahay dijitalka Hay'adda ugu sareysa ee canshuuraha caalamiga, hanti-dhowrka iyo shirkadda la-tashiga ee KPMG [More ...]
RayHaber 25.06.2019 Warbixinta Shirka
Qalabka Kobcinta Xilliga Guga (ScHor Tongue) Xiran Fidinta Qalabka Fidinta (OHF) Helitaanka Caqabada Ka Hortagga Masaajooyinka Khatarta ah ee Wadada Feexaya Dhismaha Dhismaha Xarunta Golaha PVC ee Soo Saarida iyo Rakibaada Kala Duwan Bolisyada Kala Duwan [More ...]